UMHLA WOKUKHUTSHWA KOMOYA KATSUSHIMA, UMDLALO WEDLALO, IANGLE YEKHAMERA, IBALI LEBALI KUNYE NOKUNYE OKUNINZI - IMIDLALO
Phakathi kwezona zihloko zilindelwe kwaye ziphezulu, iGhost of Tsushima igqwesile kuluhlu kulo nyaka. U-Sony uyaziwa ngokuba namandla
Phakathi kwezihloko ezilindelekileyo kunye neziphezulu, Isiporho saseTsushima ndibeke kuluhlu kulo nyaka. U-Sony uyaziwa ngokudlala ngokuqinileyo nangokuntsonkotha kwimidlalo yokudlala efana ne-Infamous and Uncharted series open-world games. Ukulandela emanyathelweni kunye nokukhokelela kwihlabathi lokudlala kukongezwa kwangoko kwi-PlayStation ekhethekileyo yeGhost yaseTsushima.
Ngumdlalo weqonga owenziwa yiSucker Punch Productions yeSony. Ukusekwa ngasekupheleni kwenkulungwane ye-13 kwiSiqithi iTsushima kunika imbonakalo entle yamahlathi, iilali, iifama kunye neentaba. Ngaphaya koko, lo mdlalo utshintshe ubugcisa bokudlala kwimidlalo evulekileyo yehlabathi kunye nokudlala okumangalisayo kokusebenzisana. Kwangokunjalo, inani elipheleleyo leenkcukacha kunye nemizobo kumdlalo uyoyikeka, eyenza ukuba uyidlale ngamava amnandi. Masingene kumhla wokukhutshwa kunye nolunye uhlaziyo lwamva nje kumdlalo.
Ukuhlaziywa komhla wokuKhutshwa
Emva kokujongana ne- Ukulibaziseka kokuqala kokukhutshwa ngenxa yobhubhane we-COVID-19. Umdlalo uphume nge-17 kaJulayi, ngo-2020, ebuqaqawulini bawo obupheleleyo. Ke ngoko, yathatha umhlaba wokudlala ngesiphepho esithengisa oontanga bayo ngomhla wokukhutshwa kwayo. I-Sucker Punch ilayishe umdlalo ngeendlela ezine ezongezelelekileyo, ezize neeseti zazo zezinto, izixhobo, kunye nokuvula amandla emidlalo ahlukeneyo.
Inqaku lokufa i-anime efanayo
Ibe ziinyanga nje ezimbalwa okoko kukhululwe umdlalo, kwaye abaphuhlisi sele behlelele ukwanda kwabadlali abaninzi kumdlalo. Ngokuqinisekileyo, u-Sony ubhengeze kutshanje kwiposti yabo entsha yeblogi, ebeka usuku lophuhliso olunesihloko esithi, Ghost of Tsushima: Legends, nge-16 kaOkthobha ka-2020. Yaqala ukutyhilwa umva ngo-Agasti, kwaye ngoku ixesha lisondele.
Isiporho sikaTsushima: Ibali kunye neMidlalo
Ibali lomdlalo lisekwe kwiziganeko ezizizo zokuhlaselwa kweJapan ngamaMongol ngasekupheleni kwenkulungwane ye-13. Nangona kuthatha ukuphambuka okuncinci apha kwaye uthathe igama eliphambili likaSamurai uJin Sakai ukuya kwisiqithi saseTsushima apho alwa khona kwaye akhusele esi siqithi kumkhosi waseMongol kwaye esokola nengxabano yakhe yangaphakathi. Ibali liyathandeka ngokuluka abalinganiswa abaliqela kumxholo webali eliphambili ulinika ubunzulu obongeziweyo.
Ukwanda okuzayo kumdlalo kudala inqanaba lomdlalo wabadlali abaninzi kwi-Intanethi. Abadlali banokudlala kunye nabanye abadlali abathathu kwimowudi entsha yomdlalo. Abadlali banokukhetha abalinganiswa babo kumaqela ahlukeneyo okulwa: I-Samurai, i-Assassin, i-Hunter ne-Ronin. Umntu ngamnye uza nezakhono ezahlukeneyo kunye nohlaselo. Abaphuhlisi bakongeze inqaku labadlali abane lokuhlasela elifana neminye imidlalo efanayo, eyile, iWorld Warcraft kunye neDestiny.
Ungalufumana njani uHlaziyo?
Imfuno yokuqala yokubamba uHlaziyo kukuba nomdlalo opheleleyo. Abanini bemidlalo baya kuba nakho ukukhuphela uguqulelo 1.1 lweGhost yaseTsushima emva kokukhutshwa kwayo. Abadlali baya kuba nakho ukukhuphela uHlaziyo lwasimahla ngokundwendwela ifom yevenkile ye PlayStation yabo i-PS4 consoles. Nangona, ukubhaliswa kwePlayStation Plus kuyafuneka ukuze ufikelele kuHlaziyo.
Lo mdlalo sele ulithathile ilizwe lokudlala ngobukhulu, kwaye ingqalelo yabaphuhlisi kumdlalo luphawu olulungileyo lokuphumelela ngakumbi kwikamva elizayo.
iphuma nini imovie yamarhamncwa amnandi elandelayo
izakuphuma nini kwibhloko yam yesizini 4
xa ixesha le-5 le-riverdale liphuma nge-Netflix
indlu yamakhadi isizini 7 umhla wokukhutshwa
Uluhlu lweefilimu zentsomi zama-2016 zamaGrike
Ngaba haikyuu unexesha lesi-5